Naannoo Amaaraa Magaalaa Waldiyaatti namoonni torba yoo ajjeefaman hedduun madaa'aniiru - BBC News Afaan Oromoo
Sanbata Duraa darbe Magaalaa Waldiyaatti walitti bu'iinsa qaamolee nageenyaaf jiraattota ayyaana Cuuphaa booda, Qaanaa Zagaliilaa kabajuuf ba'an gidduutti uumameen gaaziin imimaanessu kan dhukaafame yoo ta'u, namoonni torba lubbuu yoo dhaban hedduun ammoo madaa'uu isaanii ragaaleen ijaa BBC'tti himaniiru.
Walitti bu'iinsa Sanbata duraa galagala jalqabeen dhukaasa qaamolee nageenyaarraa dhuka'een namoonni 7 lubbuu kan dhaban yoo ta'u, namoonni lakkoofsi isaanii adda hin baane ammoo madaa'uu ragaaleen ijaan argan fi maddeen hoospitaala irraa ba'an ni mullisu.
Haata'u malee, lakkoofsi namoota du'anii kanaa ol ta'uu akka malu himamaa jira.
Finfinneerraa fageenya KM 500 irratti magaalaa argamtu kanatti namoonni BBC'n dubbise akka himanitti, dargaggoonni yoo sirban dhaabsisuuf yaaluun sababa walitti bu'iinsichaa akka ta'e dubbatu.
Dargaggoonnis kana mormuun dhagaa darbachuu yoo eegalan bittinsuuf gaaziin imimaanessu dhuka'uunsaa mormii cimsee, dhukaasni cimaan dhaga'amuu akka eegaleefii miidhaan namootarra akka ga'e ni himu.
Fuula Feesbuukii isaaniirratti lubbuun namootaa darbuu kan mirkaneessan hoogganaan BDhKMN Amaaraa Obbo Nigusuu Xilaahun, lubbuu namoota nagaa warreen galaafatan seeraaf ni dhiyaatu jedhaniiru.
Itti fufuu mormii
Mormiin kun guyyaa lammaffaaf itti fufuun Dilbata kaleessaas manneen daldalaa irratti miidhaan kan qaqqabeera, jiraattota aariin guutamaniin daandiin kan cufame yoo ta'u, sagaleen dhukaasa cimaa dhaga'amaa kan tureef qaamolee nageenyaan ala sochiin omaa akka hin jirre haati eenyummaan isaanii akka hin eeramne fedhan BBC'tti dubbataniiru.
Abbaa kaafiteeriyaa kan ta'eef maqaan isaa akka hin eeramne kan fedhu jiraataan Waldiyaa kan biraa, sagalee dhukaasaa dhaga'amuun alatti Dilbata ganamarra dargaggoonni dhagaa darbachuun qaamolee nageenyaa mormaa akka turan ragaa ba'a.
Lubbuu namootaa darbeef miidhaa qaamaa ga'een alatti qabeenyi hedduun akka barbadaa'es jiraattonni ni himu.
Tiiviin Amaaraa namoonni torba lubbuu dhabuu haa gabaasuyyuu malee, lakkoofsi namoota du'anii sanaa ol akka ta'e jiraattoni ni dubbatu.
Mormiin kun gara Magaalaa KM 20 fagaattee argamtu Haaraatti darbuun daandiin cufamee akka ture fi qabeenyarras miidhaan akka ga'e himameera.